NASSAT | Forest Fires - Kudzivirira nekuona
Internet Satellite neAntatic Orientation Antennas
Moto Division: Kushandiswa nekugadzirwa kwezvivako nenzira yeHURI
Kudzivirira ndiyo yakanakisisa uye inoshandiswa kurapwa kwechirwere chero chipi zvacho ...
Maererano DGCONA, Area Forest Fire Prevention Directorate General pakati Nature Conservation of Bazi Environment, Spain ari pamusoro mukati kunyika bheseni muMediterranean pamusoro akapisa dondo nzvimbo. Nhasi, vari kutanga kubudisa chaizvo umboo pamusoro migumisiro moto izvi vose veko mararamiro uye ayo simba zvakatipoteredza munyika yose. Izvi zvinotyisa Data kuti tione kudiwa kupindira mumwe nomumwe wedu, zvose munhu uye kambani pamwero zvakananga chikamu zvatinoedza kudzivirira kunobva upfumi, utano hwakanaka inopiwa masango edu uye mumaruwa nzvimbo dzakawanda.
Kuti izvi zvidaro, yava akakudziridza mhinduro NASSAT Satellite Tracking identifiers vanokwanisa vatorwa kufamba uye / kana yevaifungidzirwa, locators kutanga prendimientos uye zvichiita manyuko, kunze, sezvingatarisirwa, richiona nokuwedzera moto. All munguva chaiyo. ino achatsigira sarudzo basa munzvimbo muzvidzivirire, kuzvidzora uye kurwa dondo moto. The inotoda akapa ane kutarisana kuwana nzvimbo kuongororwa pamwe pfungwa dzinenge perimetrar zvatichakurukura kuti vakarongeka utariri kuwedzera mikana moto kuzvidzora uye nechokwadi kuchengeteka yevashandi mumunda, kubudikidza nzvimbo dzavo nguva dzose kudzivisa njodzi vanoramba kutambura kusvikira nhasi. Izvi mhinduro inokupai kushandisa moto, muchimiro kudzorwa unopfuta sechinhu utariri mudziyo, zvakakodzera uye chipa kuisa kukwira zvipingamupinyi kupararira moto (E. Martinez, 2001- Manual kudzorwa pomoto).
Tora mapepa nemifananidzo yakavezwa. Chero chero ani zvake anonyorwa ari kunyoresa anogona kutevera anogara ari kana smartphone kana chero imwe nzira inogona kuwana Indaneti. Uyewo, unogona kugamuchira malarms ne e-mail uye sms.
Izvi mhinduro anodzivirira dzinodiwa zvikuru zvinogona womusango ngozi uyewo sei zvikuru kubatwa kuparadzirwa, optimizing basa kuchengeteka, kuzvidzora, vachirwa dondo moto uye zvimwewo zvakafanana.
Iwe unofanirwa kuziva kuti ...
Izvo zvinokonzerwa nekuparara kwemichina (kwete kuverenga kurasikirwa kwehupenyu uye nhaka yezvisikwa zvatisingakwanise kuisa mutengo), inotarwa nemamiriyoni eEuro uye makore mazhinji ekudzorera zvishoma nezvishoma (kana zvichiita izvi zvichienderana).
Kana uchida mamwe mashoko, tapota taura neDept yedu. yeUnjiniya neKutsigira.